माधव नेपाललाई छक्याउँदै केपी ओली (बालुवाटारको सम्वादसहित)| Nepal Pati
‘पार्टीभित्र माधवकुमार नेपालले थिचोमिचो कायम गर्नु भएको छ । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नदिने र बाहिर मात्रै लोकतन्त्रको कुरा गरेर केही अर्थ हुन्न ।’ पार्टी महाधिवेसनको पूर्व सन्ध्यामा ४ बर्षअघि असार १८ गते एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए । पार्टी नेतृत्वमा आफु आएपछि त्यसकोे अन्त्य गर्ने बताएका ओलीले बदला लिने संकेत गरेका थिए ।
महाअधिवेसनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछिका दिनहरूमा ओलीले नेपालपक्षलाई दवावमा पारेका छन् । सुरुका दिनमा बदलाको भावमा हावी देखिएका ओली पछिल्लो समय नेपाललाई नजिक पारेर छक्याइरहेका छन् । लामोसमय पार्टीभित्र रक्षात्मक देखिएका नेपाल अहिले निरिह जस्तै बनेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको समर्थमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद गठनमा नेता नेपालसँग खासै परामर्श गरेनन । सुरुमा माधव नेपाल गुटका सोमप्रसाद पाण्डेलाई मन्त्री बनाएर नेपालको मन राखेजस्तो गरेर आलोचनाको पात्र पनि बनाएका थिए । नेपालले आफ्नो समुहबाट आफ्नै सम्धीलाई मन्त्री बनाएको आलोचना खेप्नु परेको थियो । तर पाण्डेलाई मन्त्री बनाउँदा उनले नेपालसँग कुनै सल्लाह गरेका थिएनन् ।
यसपटक मन्त्रिपरिषदविस्तार गर्दा पनि ओलीले यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । ओली र नेपालबीचको दूरी साँघुरिएको सन्देश दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघिका धेरै छलफलमा ओलीले नेपालको साथ खोजेका थिए । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि एमालेले दलको नेता छान्ने अघिल्लो दिन एउटै गाडीबाट पार्टी कार्यालय धुम्बाराही समेत पुगेका थिए ।
संसदीय दलको नेतामा समेत नेपालले ओलीलाई प्रस्ताव गरेर सर्वसम्मत भएको आफै घोषणा समेत गरेका थिए । एमालेका नेताहरू त्यो दृश्यबाट रोमान्चित हुँदै पार्टीभित्र गुटगत अभ्यास अन्त्य भएको बुझाईमा थिए । यसअघि दलको नेतामा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा ओली विजयी भएका थिए ।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले मन्त्रीका रुपमा लालबाबु पण्डितलाई रोजेर नेपालको मन राखे । ओलीले हामी एकै छौँ मिलेर अघि बढिरहेका छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजे । मन्त्रीको सपथका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि ग्रे कलरको कोटसहित शीतलनिवास पुगेका थिए । तर, लालबाबु पण्डित र थममाया थापाको नाम राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवले पढेपछि धेरै आश्चर्यमा परेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद दोस्रो पटक विस्तार गर्दा एमाले नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको निम्तो अस्वीकार गर्दै मन्त्रीको सपथग्रहण नै बहिष्कार गरेपछि वास्तविकता अर्को ढंगले बाहिर आएको छ । स्रोतकाअनुसार पण्डितलाई पनि नेता नेपालको सिफारिसमा ओलीले मन्त्री बनाएका होइनन् । तर सपथ लिनुभन्दा एकघण्टा अगाडि भने जानकारी गराएका थिए । त्यसको केही समयमा नेता नेपालले पण्डितलाई सपथका लागि तयार हुन खबर गरेका थिए । मन्त्री पण्डितका अनुसार नेपालले फोन गरेको १५ मिनेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट टेलिफोन गएको थियो ।
पण्डितलाई किन रोजे ओलीले ?
यसअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रुपमा पण्डितले गरेका केही निर्णयले उनले लोकप्रिय नेताको छवी बनाएका छन् । मन्त्री पण्डित नेता नेपालको प्यानलका भएपनि उनी आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा आफ्नै ढंगले चल्ने नेता हुन । एमालेका एक नेताका अनुसार ओलीले दुई कारणले पण्डितलाई राजेका हुन् ।
‘पण्डितलाई मन्त्री बनाउँदा व्यक्ति छनोटमा ध्यान दिएको भन्दै जनमानसमा पनि राम्रो सन्देश जाने र नेपाल पनि खुसी हुने देखेर ओलीको पहिलो रोजाइमा पण्डित गरेका हुन्’ ती नेताले भने, ‘कुरा बुझ्दा ओलीले नेपाल पक्षबाट उनलाई मात्रै समेट्ने देखिन्छ ।’ पण्डित नेपाल समुहका भएपनि नेपालको आग्रहमा मात्रै नचल्ने नेता भएको ओलीको बुझाई छ ।
पण्डितलाई मन्त्री बनाएका कारण पहिलो मन्त्रिपरिषद विस्तारको सपथग्रहणमा शीलतनिवास पुगेका नेपालले दोस्रो पटकको सपथग्रहण बहिष्कार गरेका थिए । ओली आफैले फोन गरेर बोलाउदा पनि नआउने भन्दै नेपाल घरमा नै बसेका थिए ।
नेपालले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री नबनाउन, यागेश, गोकर्ण, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे मध्ये एकलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका थिए । ओलीले नेपालका कुनै पनि प्रस्ताव मानेनन् । तर, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अगाडि माधवकमरेडसँग सल्लाह नभएकाले सबै मन्त्रीको नाम फाइनल नभएको बताएका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एकै पटक सात जनाको नाम दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सँगै रहेका नेता नेपाललाई देखाउँदै भनेका थिए ‘आजै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने र ? माधवकमरेडसँग सल्लाह नै भएको छैन हामी त सबै नाम आज दिन सक्दैनौ ।’
स्रोतकाअनुसार ओलीले नेपालसँगको सल्लाहमा फागुन १५ भित्र नै नाम तय गर्ने बताएका थिए । तर नेपालले दिएका एउटा पनि नाम ओलीले सुन्न चाहेनन् । त्यसयता नेता नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट छन् । ‘पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सम्धी पाण्डेलाई मन्त्री बनाएर ओलीले नेपालको मुख थुनेका थिए । अहिले पनि पण्डितलाई बनाएर त्यसै गरेका छन्’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने ‘नजिक आउन आग्रह गर्ने तर छक्काएर हिड्ने गरेको देखिएको छ ।’ आफ्नो कुनैपनि सल्लाह नसुनेपछि नेपालले पनि त्यसलाई महसुस गरेका छन् ।
मन्त्री छान्ने क्रममा भएको ओली नेपाल सम्वाद
ओलीः कसलाई मन्त्री बनाउने होला ? आजै कम्तिमा दुईजना मन्त्री पठाउनुपर्नेछ ।
नेपालः तपाईले के सोच्नु भएको छ कसलाई बनाउने ?
ओलीः ईश्वर कमरेडले साह्रै मरिहत्ते गरेका छन् । यसपटक तीनलाई पठाई दिऊ ।
नेपालः हुन्छ । तर के अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने ?
ओलीः होइन । भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ला ।
नेपालः मान्छन् त ?
ओलीः मान्छन् मेरो कुरा भइसकेको छ । (तर अन्तिममा महासचिव ईश्वर पोखरेलाई रक्षामन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।)
नेपालः मान्छन भने ठीकै छ । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सुरेन्द्र पाण्डेलाई दिऊ ।
ओलीः हुन त ठीकै हो । तर उनी एकपटक भइसकेका छन् । नयाँलाई मौका दिनुपर्ला । आज एकजना ईश्वरसँगै अर्का नयाँ पठाऊ
नेपालः त्यसो भए गोकर्ण विष्टलाई पठाऊ ।
ओलीः तीपनि यसअघि मन्त्री भएजस्तो लाग्छ ।
नेपालः जम्मा पाँच महिना जिम्मेवारी पाए । आफ्नो पर्फमेन्स पनि देखाउन पाएनन । उनलाई बनाउँदा ठीक हुन्छ ।
ओलीः नयाँलाई बनाउ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
नेपालः उसो भए योगेश भट्टराईलाई बनाऊ । युवा पनि हुन । जनताले पनि उनीबाट केहीअपेक्षा गरेका छन् ।
ओलीः योगेशलाई म बनाउदिन् । जोरी खोज्दै हिड्छन् । बुढाहरूको काम छैन भन्छन् । मन्त्रीका लागि कसैको दैलोमा जान्न भन्छन् रे । उनी हुन्न ।
नेपालः त्यसो भए कसलाई बनाउनु हुन्छ त ? भीम रावलाई बनाउनुहोस् । उनले अर्थमन्त्रालय राम्रो सम्हाल्न पनि सक्छन् ।
ओलीःउनी उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । रावलले उपप्रधानमन्त्री नभई मान्दैन । यसपटक मैले एकजना पनि उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भनिसकेको छु । अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडालाई पठाउकी भन्ने सोचेको छु मैले ।
नेपालः युवराज खतिवडा । अहिले सपथ नगराउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि भनेको छ । उनलाई बनाउदा गलत सन्देश जान्छ । अहिले बनाउनु हुँदैन ।
ओलीः सर्वोच्च अदालतलाई देखाउन त मैले मन्त्री बनाउन लागेको नि । आदेशले केही फरक पदैन ।
नेपालः खतिवडालाई बनाउनै पर्ने भए राज्यमन्त्री बनाए हुन्छ नी । पार्टीभित्र यतिका धेरै नेताहरु छन् । उनलाई बनाउनु हुँदैन ।
ओलीः राज्यमन्त्री उनी खाँदैनन । योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नै मैले मन्त्रीसरहको नियुक्ति दिएको हुँ ।
नेपालः यसमा मेरो सहमति हुन्न । नबनादा ठीक हुन्छ । पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ ।
ओलीः हुन्छ सल्लाह गरौला यस बारेमा ।
यो वार्तापछि नेपाल काम छ भन्दै बालुवाटारबाट निस्किए । ओलीले नेपालका कुनैपनि प्रस्ताव, सल्लाह नमानी निर्णय गरे । खतिवडा अर्थमन्त्रीमा र महासचिव पोखरेल रक्षामन्त्रीमा समान हैसियतमा नियुक्त भए ।